ရွှေဘိုမြို့ တွင် စုံတွဲထံမှ ဓားထောက် လုယက်သူ လေးဦးကို ၂၄ နာရီအတွင်း ဖမ်းမိ လွတ်မြောက်နေသူ?? - Yangon Media Group
ရွှေဘိုမြို့ တွင် စုံတွဲထံမှ ဓားထောက် လုယက်သူ လေးဦးကို ၂၄ နာရီအတွင်း ဖမ်းမိ လွတ်မြောက်နေသူ??
ရွှေဘို၊ အောက်တိုဘာ ၂
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရွှေဘိုမြို့တွင် စကားပြောနေသော ချစ်သူနှစ်ဦး ကို ဓားထောက်လုယက်သူ ဓားပြများအား အခင်းဖြစ်ပွားပြီး ၂၄ နာရီအချိန်အတွင်း ပြည်သူတစ်ဦး၏ သတင်းပေးကူညီမှုဖြင့် ဓားပြများအား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း ရွှေဘိုမြို့မရဲစခန်းမှ နယ်ထိန်း ခေါင်းဆောင် ဒုရဲအုပ်ကောင်း မြတ်ကျော်က ပြောသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ရွှေဘိုမြို့တွင် အမှတ်(၁ဝ) ရပ်ကွက် နယ်မြေခံတပ်အနီး တမာပင်အောက်၌ အောက်တိုဘာ ၁ ရက် ညနေ ၄ နာရီက စကားပြောနေသော ချစ်သူနှစ်ဦးအနီးသို့ ဆိုင်ကယ်နှစ်စီး ဖြင့် နှာခေါင်းစည်းတပ်ထားသော လူ ငါးဦးရောက်ရှိလာပြီး ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးအားတွန်းလှဲ၍ အမျိုးသားတစ်ဦးမှ တရားလို မောင် —၏ ဝမ်းဗိုက်အား ဓားနှင့်ထောက်ကာ အခြားအမျိုးသားတစ်ဦးမှ ဦးခေါင်းအား သံကွင်းစွပ်လက်သီး ဖြင့်ထိုးခဲ့ပြီး မ – – – ဝတ်ဆင်ထား သော လက်ကောက် နှစ်ကွင်းနှင့် လက်စွပ်တစ်ကွင်း ဆွဲကြိုးတစ်ကုံး ပိုက်ဆံအိတ်နှင့် ၎င်းအိတ်ထဲတွင်ထည့်ထားသော I Phone6Plus ရွှေရောင်ဟန်းဆက် တစ် လုံးငွေ ကျပ် ၃ဝဝဝဝ တို့အား ယူ ဆောင်သွားပြီး ဓားနှင့်ထောက် ထားသူအမျိုးသားမှ တရားလို မောင် —- ၏ အင်္ကျီအိတ်ကပ် အတွင်းထည့်ထားသော i Phone5S ရွှေရောင်ဟန်းဆက်တစ်လုံးအား ယူဆောင်ကာ ထွက်ပြေးသွားခဲ့၍ အမည်မသိအမျိုးသား ငါးဦးအား ဥပဒေအရ အရေးယူ ပေးရန် တိုင်တန်းသော အမှုဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ ရွှေဘိုမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးတာဇံနှင့် ရွှေဘိုမြို့မရဲစခန်းမှူး ဒုရဲမှူးမြင့်မောင်တို့မှ ဦးဆောင်၍ နယ်ထိန်းခေါင်းဆောင် ဒုရဲအုပ် ကောင်းမြတ်ကျော် ပါဝင်သော နယ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ သွား ရောက်ခဲ့ပြီးစုံစမ်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပြည်သူတစ်ဦး၏ သတင်းပေးကူညီမှုဖြင့် ဓားထောက်လုယက်သူ ဓားပြ ငါးဦးအနက် ဓားပြလေးဦး အား အခင်းဖြစ်ပြီး ၂၄ နာရီတွင်း ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ ဓားထောက်လုယက်သူ ဓား ပြများမှာ ရွှေဘိုမြို့ ပြင်ဈေးတောင်ပိုင်း အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်နေသူများ ဖြစ်သည့် စိုးလှိုင်မြင့် (ခ)ကြွက်နီ (၃၄)နှစ်၊ ရန်နိုင်မျိုး (ခ) ပေါက်စီ (၂၅)နှစ်၊ မွတ်တား (ခ) မျိုးမင်းထက်(၂ဝ)နှစ်နှင့်ဇော်ထက်အောင် (၁၈)နှစ်တို့ဖြစ်ပြီး ငပွား(အဘအမည်၊ နေရပ်စုံစမ်းဆဲ)ကို ဖမ်း ဆီးရမိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ဆဲ ဖြစ်ပြီး ဓားထောက်လုယက်သူ ဓားပြများထံမှ အရိုးအသွား တစ်ပေ ခန့်ရှိ ဓားဦးချွန်တစ်ချောင်းနှင့် သံကွင်းစွပ်လက်သီးတစ်ခု အပါအဝင် လုယက်သွားသော ရွှေငွေဖုန်း စုစုပေါင်းတန်ဖိုးငွေကျပ် ၃၈၃ဝဝဝဝ ခန့်အား ပြန်လည်သိမ်းဆည်းရမိ ခဲ့ကြောင်း ရွှေဘိုမြို့မ ရဲစခန်းမှူး ဒုရဲမှူးမြင့်မောင်ထံမှ သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဓား ထောက်လုယက်သူ ဓားပြများအား ရွှေဘိုမြို့ မရဲစခန်းမှ (ပ) ၅၇၆ / ၂ဝ၁၇၊ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ -၃၉၅ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး လွတ်မြောက်နေသူ ငပွားအား ဖမ်းဆီးရမိနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ရွှေဘိုမြို့မ ရဲစခန်း မှ သိရသည်။
ပဏာမ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အသင်းအတွက် ကစားသမားနှစ်ဦး ထပ်မံ အားဖြည့်ခဲ့
မွန်ပြည်နယ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း ပြည်တွင်းပြည်ပ ရ?
”မြန်မာစာ ဂုဏ်ထူးထွက်တာကြောင့် အရမ်းကိုဂုဏ်ယူတယ်” ဆိုတဲ့ မေသက်ထားဆွေ
အလောင်းတော် ကဿပ ဘုရားဖူးလမ်းကို ယခင်နှစ်များကထက် စော၍ ဧပြီ ၂၁ ရက်တွင် စတင်ပိတ်မည်
မုံရွာတွင် ချင်းတွင်းသင်္ကြန်နှင့် ရိုးရာသင်္ကြန် နှစ်ခုစလုံးကို တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ ဦးဆောင?
အဝတ်လဲခန်းအတွင်း လဲကျခဲ့သော်လည်း ကန်တီမှာ နှလုံးရောဂါ မရှိဟု ချဲလ်ဆီး ထုတ်ပြန်ကြေညာ
ဖိလစ်ပိုင်တွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်ပွား၊ ၁၀ ဦးသေဆုံး